पार्टीमा काम गर्ने पदले भन्दा पनि दृढता र इच्छा शक्तिले हो - टाकुरा न्युज
इटहरीलाई केन्द्रबिन्दू बनाएर बिगत १० बर्षदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालिन नेकपा माओबादी केन्द्रबाट (वाइसियल) बाट राजनीतिमा सक्रिय नवीन तामाङ युबाहरु माझ लोकप्रिय नेता मानिन्छन् । उनी तत्कालिन माओबादी केन्द्र वाइसियलको इटरी उप–महानगरपालिकाका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । २०५० सालमा सुनसरीको बराहक्षेत्रमा जन्मिएको तामाङ २०६६ सालबाट पुर्णकालिन राजनीती सुरु गरेका हुन् । उनको राजनीतिक जीवन, ब्यवसायिक यात्रा, राजनीतिक सक्रियता, संगठानिक भूमिका लगायत बिषयमा केन्द्रीत रहेर तामाङसँग टाकुरान्यूजका लागि मनोज निरौलाले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश –
अहिले म खास भन्नु पर्दा पार्टी एकतालाई ग्रामीण स्तरमा र इटहरीमा युवाहरुलाई मजबुत र सक्रिय बनाएर लाग्ने भन्ने बिषयमा केन्द्रीत छु । यो सँगै आफ्नै ब्यवसायमा पनि अहिले अलिअली ब्यस्तता छ । ब्यबसायमा ब्यस्त भन्नुभयो ।
तपाईँ राजनीति गर्ने मान्छे ब्यवसायका बारेमा केही बताउनुहोस न ?
मेरो अध्ययन र पारिवारिक ब्यबसायिक पृष्ठभूमिका आधारले स्थानीय स्तरमा विभिन्न बिकास निर्माणका काममा सघाउने गर्छु । म र मेरा केही साथीहरु मिलेर हामी (नमु निर्माण सेवा) भन्ने कम्पनी केही समयदेखि सन्चालन गरिरहेका छौं । म लगायत मेरा अनन्य मित्रहरु साजन राई, नवीन चौधरी र दाइ मन कुमार राई मिलेर उक्त कम्पनी सञ्चालन गरिहरेको अवस्था छ । यसैमा अलिअली ब्यस्त रहिन्छ ।
तपाईको बुझाइमा संगठित पार्टीका युवाहरुको राष्ट्र निर्माणमा कस्तो भुमिका हुनुपर्छ ?
सर्बप्रथम त राष्ट्र निर्माणमा युवाहरुको नै ठूलो भूमिका रहन्छ । युवाले नै राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने हो । सरकारलाई सघाउने हो । पहिलो कुरा त युवामा सक्षमता र नेतृत्वदायी भूमिका जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि पार्टी कमिटिले केन्द्र स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तर सबै क्षेत्रबाट युवाको नेतृत्व क्षमता अभिबृद्धिको लागि विभिन्न किसिमका रचनात्मक कार्यक्रम गर्न जरुरी रहेको छ । युवा भनेको त्यो शक्ति हो जस्ले संयमताको बाँध टेकेर खरो पथ्थर पनि पग्लाउन सक्छ । विभिन्न नयाँ कन्सेप्टले नयाँ र रचनात्मक काम गर्ने क्षमता र जोस पनि युवामै हुन्छ । हाम्रो पार्टीले पनि सहायक भूमिकामा युवालाई नै अगाडि सारेको छ । एक अर्थमा भन्नु पर्दा युवामा परिबर्तनका लागि नयाँ रचनात्मक काम गर्ने इच्छाशक्ति र जोस सधैं नै रहन्छ । त्यसैले राजनीतिक पार्टीको मात्र नभएर सम्पुर्ण युवाहरुको राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
समग्र रुपमा भन्नुपर्दा तपाईँको बुझाईमा युवामा रहेका खास सम्स्याहरु के हुन् ?
आजका बिध्यार्थी भोलिका कर्णधार हुन् भन्ने एउटा नेपाली उखान छ । त्यस्तै, हिजोका बिध्यार्थी आजका युवा र आजका बिध्यार्थी भोलिका युवा हुन् । यस अर्थमा भन्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्रमा भएको बिकृती र बिसङ्गतिका कुराहरु आउंछन् । हाम्रो अहिले सम्मको शिक्षा प्रणालीले बिध्यार्थीलाई रचनात्मक र प्राक्टिकल शिक्षा दिनै नसकेको अबस्था छ । एउटा गरीब परिवारको क्षमता भएको बिध्यार्थी आर्थिक समस्याको कारण कहिल्यै डाक्टर र इन्जिनियर बन्नै सक्दैन । हाम्रो शैक्षिक प्रणाली नै अलिक फितलो भएको पनि हो । त्यसलाई ब्यबस्थापन गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेपनि त्यसले सफलता पाएको देखिदैँन। अर्कोतर्फ हामीले समाजमा भएका अनाथ, असहाय बालबालिकालाई ब्यबस्थापन गर्न नसक्नु पनि अर्को समस्या हो । आज भोक तिर्खा र समाजको हेपार्इ खपेका ती सडक बालबालिका भोलिका दिनमा समाजको दुश्मन भएर निक्लने कुरामा दुर्इमत रहन्न । आज विभिन्न तवरले चोरी, डकैती , हिंशा र पैसाको प्रलोभनमा अपराधिक गतिबिधी गर्ने अधिकांश ब्यक्तिहरु हिजोका त्यही सडकका बालबालिका हुन् भन्ने मेरो बुझाई छ । यो कुरालाई हामीले अब पनि ब्यबस्थापन गर्न सकेनौं भने भोलि पनि हामीले यो स्थिती भोग्नु पर्ने देखिन्छ । युवाको खास समस्या भनेको चैं आफ्नो अध्ययन अनुसारको काम र जागिर नपाएर बिदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती पनि हो ।
नेकपा इटहरी नगर समिती चयन हुंदा तपाईं लगायत केही युबाहरुलाई नेतृत्वले जानिजानि बाईपास गरेको भन्ने कुरा पनि आएको थियो नि ?
केही समय अगाडि सम्म पार्टीमा केही कमी कमजोरिहरु रहेका थिए । अब हामी पार्टी एकताको दौरानमा निकै अघि बढिसकेका छौं । अब बितेका कुरालाई खण्डन गर्नुभन्दा पनि हामी पार्टीको सर्कुलर अनुसार पार्टीलाई सक्षम र अझ बलियो कसरी बनाउँने भन्ने तिर हामी केन्द्रीत छौं । अर्को कुरा पार्टीमा काम गर्ने पदले भन्दा पनि दृढता र इच्छा शक्तिले हो । यो कुरालाई मध्यनजर गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आएको छ।
अन्त्यमा मैले प्रश्न गर्न छुटाएका र तपाईँलाई भन्नै मन लागेका केही कुरा छन ?
सर्बप्रथम मेरो कुराहरु राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा टाकुरान्यूज टिमप्रति कृतज्ञ छु । हामी पार्टी एकता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझ भब्य बनाउँनका लागि ग्रामीण स्तरबाट विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने योजनामा छौं । अरु चैं अब बोल्ने भन्दा पनि काम गरेर देखाउने समे हो ।
Tags: टाकुरा न्यूज